Ahoana ny fanarahana ny fomba "Volo olioly" tsikelikely | Bezzia
Ahoana ny fomba hanarahana tsikelikely ny fomba "Hair Curly"
Toñy Torres | 17/07/2021 20:00 | beauty
Ny curls dia amin'ny lamaody ary mihamaro ny olona manaraka ny fomba Curly Hair mba hahatratrarana azy. Na dia somary sarotra aza izany dia mahavariana ny valiny. Raha vantany vao miditra amin'ny mahazatra ianao ary mampiditra ireo vokatra mety dia azonao atao izany farito ny curl-nao ary ataovy toy ny fony ianao mbola kely.
Ny mpamorona an'io fomba io dia ilay stylistista Lorraine Massey, mahafantatra fa ny volo olioly dia mitaky fikarakarana manokana sy fomba fanao mifanaraka amin'ny miavaka ao aminy. Ny volo olioly matetika dia sarotra fehezina, matetika dia karazana volo matevina, porous ary voluminous.
Ho an'ny olona manana curl voajanahary, ny fihazonana an'io karazana volo tonga lafatra io isan'andro dia mitaky ezaka bebe kokoa. Izay adika amin'ny fampiasana vy sy karazana fitaovana rehetra hanitsiana ny volo, satria ny volafotsy malama dia mora kokoa amin'ny fikarakarana tsara. Sa izany, hatrizay dia misaotra an'i ny fahalalana rehetra misy momba ny curl noho ny fomba Curly Hair, izay rehetra mankafy a volo olioly afaka mitafy mana tonga lafatra isan'andro izy ireo.
1 Inona ny fomba Hair Curly?
2 Tazomy sy havaozy ny volo araka ny fomba Curly Hair
Inona ny fomba Hair Curly?
Ny fomba dia misy esory ireo vokatra misy akora tsy mahasoa ho an'ny curl, toy ny sulfate, silicones na savoka. Ireo kosmetika rehetra ireo dia tsy maintsy soloin'ny hafa afaka amin'ireto akora simba rehetra ireto, mba ho sitrana sy hihazonana ny elatra sy ny endrika voajanahary ny curl. Raha fintinina, dia teknika fanodinana lalina sy tsy miovaova izy io, izay ahatratrarana curl voluminous, miaraka amin'ny vatana sy tsara tarehy.
Manaraka izany dia holazainay aminao ny dingana tsirairay hanarahana ny fomba Hair Curly. Alao ny vokatra, shampoos, sarontava ary vokatra mety tsara tsy misy sulfate, savoka ary silikazy. Ny vaovao tsara dia hoe efa manana ny rojo fivarotana lehibe fisafidianana tsara ireo vokatra ireo, mora vidy sy mora hita.
Eny, izao ny dingana tsikelikely amin'ny fomba «Volo olioly»
Sasao mialoha: Alohan'ny hanombohana dia mila manasa farany ianao miaraka amin'ny shampoo izay misy sulfate fa tsy silicones. Ny hevitra dia ny fanafoanana ireo residu savoka sy silônika izay mety misy ny volo, noho izany dia mila manasa farany amin'ny karazana shampoo ity ianao.
Sasao aloha ireo vokatra vaovao: Amin'ny manaraka tsy maintsy hanasana ny volonao dia tokony efa mampiasa shampooing manokana ianao raha tsy misy ireo zavatra voalaza.
-javatra mampahalefaka: Ity misy ny lakilen'ny fomba, hamoahana tsara ny curl dia tsy maintsy apetrakao toy izao manaraka izao. Miaraka amin'ny volo mando tanteraka ary midina, manomboka mampihatra ny vokatra ary araraoty ny elanelam-potoana. Raiso amin'ny tananao ny rano dia alao ny volo, atsofohy (tsy kosehina) mba afangaro ny rano sy ny etona. Amin'ny farany, kobanina amin'ny rano mafana toy ny mahazatra.
Farito ary maina: Miaraka amin'ny fisafidianana ireo vokatra manokana, jereo fampiharana vokatra styling ny mane manontolo. Mampiasà diffuser hanamaina ny curl-nao amin'ny famaritana tonga lafatra.
Tazomy sy havaozy ny volo araka ny fomba Curly Hair
Ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny volo olioly dia ny fihazonana ny famaritana aorian'ny fatoriana. Mba hisorohana an'io dia tsy maintsy matory isan-kariva miaraka am-boninkazo avo na mampiasa tavy hatory. Ny ampitso maraina, hamelombelona ny volo miaraka amin'ny tsiranoka manalefaka, tsara kokoa ny mampiasa vokatra manokana ho an'ny curl izay tsy misy iray amin'ireo zavatra voarara.
Ampiasao ny rantsan-tànanao mba hamaritana ireo curl mandritra ny fampiasana tsifotra, nefa tsy mampiasa karazana tohotra mba hialana amin'ny famongorana ny curl. Mariho fa ny volo dia mila vanim-potoana fampifanarahana, satria efa zatra ireo akora ireo izay efa nampiasaina nandritra ny taona maro. Mandra-pahatongan'ny herinandro vitsivitsy dia ho hitanao fa tsy mitovy ny volonao, na dia manintona aza ianao ary halaim-panahy hiala amin'ny fomba.
Manàna faharetana ary mifikira amin'ny fanazaran-tena mandritra ny 3 herinandro farafaharatsiny, satria io no fotoana ilain'ny vatana mifanaraka amin'ny fanovana rehetra. Tsy misy maha samy hafa azy ny volo ary maharitra fotoana lava be vao azo ampiasaina ireo vokatra sy akora vaovao hamelomanao azy. Raha vantany vao mandeha ny fotoana ary raha mitazona fanazaran-tena lava volo olioly ianao dia hankafy curl feno fialonana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ahoana ny fomba hanarahana tsikelikely ny fomba "Hair Curly"
Akoho misy amandy